Yiba uchwepheshe wokugenca nokuvikela | Kusuka kuLinux
Luigys toro | | I-GNU / Linux, Kunconyiwe
Bonke abafundi be-SinceLinux kufanele bacacelwe ngokuthi kusho ukuthini ukuba 'yi-hacker', ngoba umngane wethu UChrisADR ayibachazanga ngemininingwane eyanele kule ndatshana Kusho ukuthini ukuthi 'hacker', isiphithiphithi esidalwe yilo mbhalo, sengeze kwinani elikhulu lezivakashi ezifika kithi zizofuna ulwazi mayelana Ukugenca kanye ne-cybersecurity, ngokuhlanganiswa nesipiliyoni sethu esinzima sokuvikela amaseva ethu, unathi "ubophezelekile" ukuzama ngazo zonke izindlela ukwenza ngokukhethekile futhi ufunde kabanzi ngale ndawo ethakazelisayo.
Kumele sikucacise lokho "Akuyona inhloso yethu ukuthi ulwazi lokugenca nokugwaza lusetshenziswe kunoma ngubani", kubheke phansi, Sifuna abasebenzisi bethu kanye nomhlaba jikelele bakwazi ukufunda kancane kancane amasu nemiqondo ebavumela ukuthi bazivikele ekuhlaselweni okuyingozi, noma ukwehluleka ukuthi banamandla okwenza lokho dala izinqubomgomo zokuphepha ezizisizayo ekuqedeni amathuba okuhlaselwa.
Angiyena uchwepheshe endaweni, kepha uma ngisebenze isikhathi eside e- izindawo lapho ukuphepha kwamakhompiyutha kuthathwa ngokungathi sína kakhulu, Nami bekufanele ngenze njalo phatha imigomo yokuphepha yamakhasimende ami, kepha ngaphezu kwakho konke ezingeni lokuhlela engigxile kulo dala futhi usebenzise amasu okwenza izinhlelo zami zokusebenza zivikeleke kakhulu. Ngakho konke lokhu ngiqonde ukuthi ngokungahambisani nalokho abantu abakucabangayo, amasu okugenca, noma ngabe kulula kangakanani noma ayinkimbinkimbi kangakanani, angaba nomthelela omuhle osukwini lwethu usuku nosuku, asivumele ukuba sibe namakhompiyutha nezinhlelo eziphephe kakhudlwana, sivimbele kaningi ubumfihlo bethu bwephulwa, kanye nokuqinisekisa ubuqiniso bemininingwane yethu.
Ngemuva kwakho konke lokhu okungenhla, akufanele kube yimfihlo kunoma ngubani wethu ukuthi kufanele funda kahle mayelana nokugenca kanye ne-cybersecurityNgiyakwenza, kuyindlela emnandi, engajwayelekile, kepha ngaphezu kwakho konke indlela ekhombisa ukungathí sina nesiqondisi esanele ukuze ungagcini ngokwenza amasu anganconyiwe kakhulu. Ngiqale ngokufundwa okusakazeke impela, kepha ngikwazile ukuthatha isifundo engicabanga ukuthi kufanelekile nge Qedela Inkambo Yokugenca Yokuziphatha, Le mfundo ingivumele ukuthi ngibe nolwazi oluqinile emiqondweni, ezinkambisweni nasemazingeni aphathwa usuku nosuku kulezi zindawo, ngaphezu kokungiqondisa dala ilebhu yami engibheka ngayo ubucayi nezinsongo engizama ukuzihlanganisa ngamasu engiwafundiswe esifundweni.
Isigqebhezana sizosebenza kusuka ngoJanuwari 6, 2018
Isigqebhezana siguqule imajini yesaphulelo ngokususelwe ekukhuleni kwentengo yoqobo ngumdali wezifundo. Akunandaba nentengo, inkambo ithuthukisiwe ngezibuyekezo ezintsha
Njengasezifundweni ezedlule, ngikwazile ukuthola isigqebhezana ukuze abasebenzisi beDesdeLinux bathole inkambo leyo ngentengo ekhethekile ezinsukwini eziyi-7 ezilandelayo, ngokulandela lokhu isixhumanisi uzokwazi ujabulele unomphela isifundo ngesaphulelo se- 90% 75% . Ngendlela efanayo, nginqume ukwenza ukubukeza okunemininingwane ngezifundo ukuze sibe nombono wokuthi yini esizoyizuza kanye nemicabango yami ngokuqukethwe kwayo, isakhiwo, indlela yokufunda, phakathi kokunye.
1 Isingeniso kuHacking and Cybersecurity.
1.1 Imininingwane yobuchwepheshe besifundo
1.2 Mayelana nomfundisi kanye nendlela yokufunda
2 Iziphetho zomuntu siqu
3 Inkambo ehlobene nokugenca nokuvikela
Isingeniso kuHacking and Cybersecurity.
Imininingwane yobuchwepheshe besifundo
Le nkambo yakhiwe ngamavidiyo angama-104, ezihlanganayo ngaphezu kwamahora angu-16 wokudlala, ngemibhalo ebanzi, konke ngeSpanishi futhi iqondiswe ku- a umphakathi wawo wonke amazinga ezemfundo. enikeza isitifiketi sokuphothula, ukufinyelela kule nkambo kuvela ku-Udemy Platform ongayithola kusuka kunoma yisiphi isiphequluli futhi Izinhlelo zokusebenza ze-Android ne-Ios.
Lesi sifundo siyi-100% theory - iyasebenza, inemihlahlandlela eminingi yezinkomba, ngakho kuyo yonke uzofunda amasu kodwa futhi usebenzise lokho okufundile, isigaba ngasinye sikhombisa futhi lokho okukugcwalisayo.
Mayelana nomfundisi kanye nendlela yokufunda
U-Eduardo Arriols Nuñez isifundisa ngokusobala nangokuqondile ngokugenca nokuphepha kwe-cyber enkambweni yakhe Isingeniso kuHacking and Cybersecurity, ngezibonelo ezinemifanekiso kanye nemiboniso yangempela ezindaweni ezilawulwayo nezingalawulwa, kulo lonke lolu hlelo kusinikeza amathiphu awusizo impela, ngaphezu kwalokho inkambo iyonke inomphakathi osebenza ngokwedlulele owabelana ngolwazi oluqinisekiswa nguthisha.
Le mfundo ihlukaniswe yaba amayunithi ayisithupha aqondiswe ngale ndlela elandelayo
Iyunithi 1: Leli yiyunithi ehlose ngokucacile ekunikezeni ububanzi benkambo, yethula imiqondo eyisisekelo futhi, ngaphezu kwakho konke, inikeze amathiphu amaningi ngangokunokwenzeka azokuvumela ukuthi uzuze kakhulu esifundweni.
I-2 iyunithi: Ngamavidiyo ayi-6 emizuzu eyi-10 ngokwesilinganiso, kunikezwa isingeniso esithakazelisa kakhulu mayelana nokugenca kwe-Ethical kanye ne-Cybersecurity, lapho sizofundiswa khona ngemibono eyisisekelo yokuphepha nokucwaningwa kwamabhuku, ngaphezu kokusinikeza uqeqesho oludingekayo ukuze sikwazi ukuhlaziya izinhlobo ezahlukahlukene futhi ukuthwala kokuhlasela, izindlela zokuphepha nezokuphepha.
Iyunithi 3: Iyunithi yesithathu isivumela ukuthi sifunde ukuzakhela ama-laboratories ethu okuhlola, lapho ukubona khona kahle imishini ehlaselayo nengakwazi ukuba sengozini kuzoba yisisekelo sentshisekelo yethu, futhi u-Eduardo usinika ukuhlaziywa okuhle ngokusatshalaliswa okuyinhloko okuhloswe nge-Ethical Hacking futhi asixwayise ngalezo ukuthi banohlobo oluthile lokuba sengozini (okwenzelwe ukufunda ukuxegisa amasistimu nezinsizakalo).
I-4 iyunithi: Ungayilindela kanjani i-distro u-Eduardo ayincomayo ukuthi ifunde futhi izuze kakhulu ku-Ethical Hacking yiKali Linux, ngakho-ke kuyunithi yesine sifundiswa ngokujulile ukuphathwa kohlelo lokusebenza, amathuluzi aphambili atholakala kule distro akhonjisiwe, sinikezwe ukuqeqeshwa okuhle ekusetshenzisweni kwekhonsoli futhi sifundiswa ukuthuthukisa imibhalo ku-bash yokwenza imisebenzi ngokuzenzekelayo.
I-5 iyunithi: Iyunithi yesihlanu ihlose ukungaziwa ku-intanethi, lapho sinikezwa khona ngokucacile nangokuqondile isingeniso kanye nochungechunge lwemibono eyisisekelo ehlobene nokusetshenziswa kwamanethiwekhi wokungaziwa, ngendlela efanayo, sifundiswa ukufaka nokusebenzisa amathuluzi okungaziwa afana I-TOR, i-FreeNet, i-l2P, ama-proxies wokuzulazula, izinsizakalo ze-VPN futhi okokugcina sifundiswa ukuthi sizakhela kanjani ipulatifomu yethu yokufihla amagama.
Iyunithi 6: Okokugcina kwamayunithi kusilungiselela izwe elinzima nelingokoqobo, lapho nsuku zonke sibhekana nobuthakathaka nokuthi ngaphandle kwezindlela zokuzivikela ezenele kuzodingeka ukuthi sithinteke, sizofunda izindlela zokulwa nobunjiniyela bezenhlalakahle kanye nezinqubo ezanele zokwabelana ngolwazi, ngokulinganayo ngale ndlela, sizokwazi ukubona nokuxhaphaza inani elikhulu lobuthakathaka ngochungechunge lwamasu namathuluzi u-Eduardo azosifundisa ukuwasebenzisa. Le yunithi yiyona enkulu kunazo zonke futhi inezigaba ezingama-65, lapho ngendlela eningiliziwe uzofunda izindawo eziyinkimbinkimbi kunazo zonke ezihlobene nokugenca ngokuziphatha.
Iziphetho zomuntu siqu
Amayunithi ethula ama-video ahlukahlukene kanye nemibhalo ehambisana nokufunda ngakunye, ngezivivinyo ezibonisa ngempela amakhono atholakele, ngaphandle kokungabaza kuyindlela enhle ukuqala kulo mhlaba omkhulu wokugenca nokuphepha kwe-cyber.
Uma ungumpetha wokugenca nokuphepha kwe-cyber, kulesi sifundo uzothola izisekelo zobuchwepheshe ezingagcizelela ulwazi lwakho, uzokwazi futhi ukuqinisekisa amasu okungenzeka awazi futhi uzoba nethuba lokuxhumana nabangaphezu Abafundi be-700 ababhalisele lolu lwazi olukhulu.
Okugqamile ngukuthi inkambo 'iyaphila'. Lokhu kusho ukuthi amavidiyo amasha azolayishwa njalo ngenyanga, ngakho-ke, intengo yenkambo yabafundi abasha izokwenyuka. Kubo bonke labo bafundi asebethole isifundo phambilini, bazokwazi ukufinyelela okungenamkhawulo kukho konke okuqukethwe okusha okwenziwayo.
Ekugcineni, ukwethulwa kwenkambo kungabonakala kuvidiyo yesingeniso ese-Udemy, ngithemba ukuthi kuzoba wusizo kuwe futhi usebenzise leli thuba cupón ukuze bonge imali uma kungenzeka bafise ukuyithola, ngoba ngokuvamile intengo yesifundo ingama- $ 120 futhi ngesaphulelo kuzoba 10,99 $ I-29,99 $.
Inkambo ehlobene nokugenca nokuvikela
manje senza inkambo ehlobene ebizwa ngokuthi Isingeniso kuHacking and Cybersecurity, yakhiwe ngamavidiyo angama-56, adlala amahora angaphezu kwayisishiyagalombili, enamakhasi angaphezu kuka-8 wolwazi oluningiliziwe, konke ngeSpanishi futhi kuhloselwe izethameli zawo wonke amazinga ezemfundo. Inezivivinyo eziyi-250 ezisatshalaliswa ngamazinga futhi zinikeza isitifiketi sokuphothula ... Sasitholile nesigqebhezana kodwa sasethemba ukuthi sizokwabelana ngaso kungekudala kwenye indatshana, ngokuphuthuma nokukusiza ekuqeqeshweni kwakho, lapha ushiye i- isixhumanisi yekhuphoni lale nkambo ukubiza u- $ 10,99.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Kunconyiwe » Yiba nguchwepheshe wokugenca nokuvikela
UJuan Martin kusho
Isigqebhezana sesaphulelo asibonakali sisebenza. Isinikeza isaphulelo esingu-75% futhi singahlala kuma-euro angu-29,99… njengabo bonke abantu abafinyelele ngaphandle kwesigqebhezana.
Phendula uJuan Martin
Sawubona, ngiyaxolisa, empeleni ngixhumene nethimba le-Udemy futhi isigqebhezana sizosebenza kusukela kusasa, ngakho-ke ngiyaxolisa ukuthi besingatholakali namhlanje ... Okwamanje ngizoshiya inothi ku-athikili nosuku kusasa ngizobuyekeza futhi lapho isigqebhezana sisebenza ..
adrian abadin kusho
Phendula u-adrian abadin
Sibuyekeze i-athikili yokuqala ngezinguquko nezincomo ezidingekayo, ngeshwa ngenxa yezizathu ezingaphezu kwamandla ethu, isigqebhezana singanikeza isaphulelo esingu-25% kuphela ukuze sibize u- $ 29,90 ... Ngendlela efanayo, siye sacaca kakhulu ubeke amazwana futhi wengeza isigqebhezana senkambo efanayo.
UFrank Davila kusho
U-AMigo ngiyaxolisa, ngivela eVenezuela futhi nginentshisekelo esifundweni kodwa akudingeki ngikhokhe leyo mali.
Phendula uFrank Davila
UHector Padró kusho
Shit, qhubeka uvotela uMaduro.
Phendula uHéctor Padró
anti obomvu kusho
Ngokwalokho esisele ngakho, abakhongi bezwe.
Nami ngivela eVenezuela kepha angiqondi ukuthi la mazwana afunani.
Sawubona Sawubona ekuseni! Ngichofoza kusixhumanisi nesabelo futhi isaphulelo esishiwo asiveli, ngifuna ukwenza le nkambo.
INGELOSI SATO Arevalo kusho
Nginekhadi elinenani elilinganiselwayo, kodwa kubonakala sengathi isigqebhezana asisebenzi.
Phendula i-ANGEL SATO Arévalo
Sawubona, unawo umqondo wokuthi isigqebhezana sizosebenza nini? Ngibonga kakhulu.
Isigqebhezana sesaphulelo asibonisi okwamanje
Ngiyabonga kakhulu ngendatshana !!!!! Sicela usazise uma isaphulelo sizotholakala? Jabulela
Esihlokweni sithi isaphulelo singama-90% kepha empeleni singama-75% .. 🙁
Ngibe ngumsebenzisi we-udemy iminyaka embalwa futhi bavame ukubeka izaphulelo ezahlukahlukene ezisuka ku-50% ziye ku-90%. Kuyindaba yokulinda ukubuyiselwa kuka-90% uma ungakwazi ukukhokhela inani langempela noma isaphulelo esingu-75%.
Ngisanda kuthenga isifundo seJava ku-Udemy futhi ngicabanga ukuthenga futhi inkambo yokuziphatha okuhle, ngabe uyazi ukuthi okunikezwayo kuthathwa kaningi, noma uma kugcina ngosuku okushiwo yikhasi noma uma belula ezinye izinsuku ezimbalwa?
Ngisitholaphi isigqebhezana ukuze sibe ngu- $ 10.99?
sawubona, ngabe kukhona okusha owaziyo mayelana nesigqebhezana?
UJorge Perez kusho
Isifundo sibukeka siheha, kepha ikhodi ayivumelekile noma ayiyona inkambo.
Phendula uJorge Perez
Mhlawumbe uma usinikeze ikhodi yekhuphoni singayisebenzisa… 🙂
Ingabe uzothumela ikhodi yekhuphoni ukuze siyisebenzise?
Ngabe kukhona okwaziyo ngesigqebhezana?
Bafo ngikuqinisekisile ukuthi isigqebhezana asisebenzi njengoba kufanele, sengibhalele amahlandla ambalwa umuntu ophethe ukusinikeza iphromoshini e-Udemy, kodwa ngeshwa useholidini eCuba enokuxhumana okuncane ... Ngokushesha njengoba isigqebhezana silungiswa, ngizothumela i-push entsha ukuze wonke umuntu azi futhi ngizophendula kubo bonke abanentshisekelo ukuze bathole isaziso ...
Ngiyaxolisa ukuthi isigqebhezana asisebenzi kahle, futhi ngithemba ukuthi ungazuza maduze futhi ufinyelele inkambo enhle kangaka ngentengo ebiza kakhulu
Ngiyabonga kakhulu ngolwazi lweLagarto. Silangazelela ukusho isigqebhezana !!!!
Ngiyabonga kakhulu ngolwazi
Ngiyabonga, ngizobe ngibhekile.
Kepha isigqebhezana sisebenza kanye nomnikelo wamanje noma isigqebhezana esehlukile esikushiya nesaphulelo esingu-90% ???
Ngekhuphoni intengo yenkambo ingaba ngu-10.99 $
kulungile futhi njengenani lezinsuku, kuphuma nini isigqebhezana ??? noGrax
Ntambama, isaphulelo esingu-90% asikabonakali namanje. Nginentshisekelo yokuthatha isifundo. Ngicela ungazise lapho singakunika khona? Ngizobe ngibhekile, kodwa uma kwenzeka. Isifundo esivela ekhasini le-udemy ngesaphulelo esingu-90% nenani lika-10,99, lingenye yamahora angama-25, ngesiNgisi.
Ngifuna isigqebhezana uma nginentshisekelo esifundweni kepha angikwazi ukukhokhela inani langempela lalesi sifundo 🙂
Ngilinde nesigqebhezana (:
Hea ngiphinde ngilungele isigqebhezana sokuthi isifundo sibukeka sisihle 😉
Ngiyabonga futhi ngithatha leli thuba ukukuhalalisela ngebhulogi, okuyinto enhle kakhulu, yize ngididekile futhi angikaze ngibhale ukuphawula.
Ukubingelela okuvela kwaBielefeld !!!
Bafowethu ekugcineni sithole impendulo maqondana nesigqebhezana ebesinikezwe sona ukuze bonke abasebenzisi be-desdelinux bakwazi ukufinyelela kule nkokhelo ngemali eyi- $ 10,99, ngeshwa lesi sigqebhezana ngeke sikwazi ukusetshenziswa ngaphandle kwe- $ 30 ngesifundo ngasinye amagama, isaphulelo esingu-75%, lokhu ngoba umsebenzisi owenze isifundo ukhuphule izinga lakhe futhi ipulatifomu ivumela kuphela le mali okungenani (ngiyazisola ukuthi lokhu kwenzeke). Abasebenzi bakwa-Udemy bazamile ukufinyelela kumsebenzisi ukuze bafinyelele esivumelwaneni, kodwa ngokusobala abaphendulanga ngenxa yokuba seholidini.
Ngendlela efanayo, le nkambo ingubukhazikhazi, ngoba UPaco Sepulveda isifundisa ngokusobala nangokuqondile mayelana nokugenca nokuphepha kwe-cyber, ngezibonelo ezibonisiwe nemiboniso yangempela ezindaweni ezilawulwayo nezingalawulwa
Ngiyabonga kakhulu ngolwazi!
umfula we-zaf kusho
Uyazi ukuthi isigqebhezana sesaphulelo sisasebenza yini? '
Phendula emfuleni we-zaf